जलवायु परिवर्तन प्रभाब असोजमै पाक्यो सुन्तला ! - Jyotinews
जलवायु परिवर्तन प्रभाब असोजमै पाक्यो सुन्तला !
ज्योतिन्यूज २०७७ असोज १२ गते ७:३५
गलकोट, १२ असोज ।
मौसमी र बैमौसमी सुन्तला उत्पादनसँगै किबी, अलैँची, तरकारीको समेत खेती गर्दै आउनुभएका खड्का बागलुङकैै अगुवा कृषकका रुपमा चिनिदै आउनुभएको छ । बाह्रै महिना सुन्तला उत्पादन गर्ने गरी बेमौसमी सुन्तलाका बिरुवा विस्तार गरिरहेको खड्काको भनाइ छ ।रासस